Ny dingana famokarana boaty fonosana
Fantatry ny mpanamboatra boaty fonosana fa dingana sarotra ny famokarana boaty fonosana. Ny asa samihafa amin'ny ankapobeny dia mihevitra fa raha mangataka anao hanao famokarana anio ianao dia afaka mahazo izany avy hatrany. Raha ny marina, ny indostria tsirairay dia manana ny fomba fiasany manokana. Ilaina ny boaty baoritra feno kalitao. M...
Boky fomba baoritra fonosana boaty Manufacturing
Ho an'ny zava-baovao amin'ny vokatra, ny mpanamboatra fonosana dia tena mijaly mafy. Eo ambanin'ny fepetra takiana amin'ny fiantohana kalitao dia ilaina ihany koa ny endrika tokana. Izany no nahatonga ny boaty fanomezana fonosana miendrika boky. Ka ahoana ny fomba famokarana ny boaty famonosana karazana boky ...
Boaty famonosana fanomezana azo aforitra
Famokarana boaty famenoana fanomezana: 1. Fitaovana: Taratasy manokana apetaka amin'ny taratasy fisaka volondavenona 1000 g 2. Fomba: bronzing. Fanamboarana boaty taratasy famenoana fanomezana: MOQ: 1000 sekely (mifototra amin'ny fitaovana, asa tanana, quotation be dia be, be dia be ary vidiny tsara) Famaritana vokatra: namboarina o...
Fa maninona no misy andiana firavaka mametraka boaty famenoana manokana mampiasa taratasy bebe kokoa fa tsy fingotra?
Minoa fa maro ny namana te-hanamboatra boaty famonosana namboarina namboarina te-hahafantatra ny antony nahatonga ireo boaty firavaka mifandray amin'ny embryon fingotra nalaza be taloha. Taorian'ny 10 taona dia nanomboka niova haingana ny toe-draharaha, ary maro ny orinasa boaty fonosana no nanomboka niova ...
Mpanamboatra pirinty boky matihanina avy any Shina
Mitadiava mpanao pirinty boky matihanina tsara eny an-tsena dia tsy mora, mila manamarina raha mahafeno fepetra izy ireo, afaka mahita avy amin'ny teboka etsy ambany: Taona naorina Na manana traikefa amin'ny fanondranana any ivelany Service: mamaly haingana, mandray andraikitra amin'ny olana raha misy Saving cost: miaraka...
Baoritra fanomezana boaty namboarina mpanamboatra
Boaty fanomezana baoritra namboarina Filaharana kely indrindra: 1000 pcs (mifototra amin'ny fitaovana, asa tanana, quotation be dia be, be dia be ary vidiny tsara) Famantarana ny vokatra: namboarina amin'ny fangatahana, endrika maimaim-poana Taratasy tarehy (ambony): Taratasy varahina roa, taratasy manokana, taratasy kraft , baoritra mainty...
Mpanamboatra manokana ny bokim-bola
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-25
Ahoana ny fomba hahitana mpanamboatra tsara ho an'ny boky board ho an'ny ankizy? Jereo ny mpanamboatra boky na manana traikefa an-taonany amin'ity sehatra ity; Jereo raha tena matihanina izy ireo mba hanampy amin'ny fitsitsiana ny fandaniana; Jereo raha mahay mamaha ny olana aorian'ny varotra izy ireo raha misy; Jereo raha afaka namerina...
Boaty famonosana taratasy manokana
Ny tombony amin'ny fanamboarana boaty fonosana taratasy 1. Tombontsoa fiarovana amin'ny tontolo iainana: tsy azo ampiasaina indray, fa azo ampiasaina amin'ny fanaovana zezika amin'ny vokatra fako taratasy fako; 2. Tombontsoa ara-teknika: ny fitaovana fonosana taratasy dia manana elastika kely, tsy misy fiantraikany amin'ny hafanana sy ...
Ohatrinona ny boaty baoritra kosmetika mahazatra?
Ohatrinona ny boaty baoritra kosmetika mahazatra? Ny fanontaniana toy izany dia matetika apetraky ny mpanjifa. Na dia efa ela aza no nanao varotra dia mahatsiaro ho tsy afa-manoatra aho rehefa nandre io fanontaniana io. Eto dia afaka mizara aminao ny antony tsy mahavaly an'io fanontaniana io ny mpanamboatra boaty fonosana kosmetika. Voalohany indrindra, ...
© Copyright - 2012-2023 : Zo rehetra voatokana.